Imininingwane Yokulandela Inkinobho ye-Twitter kanye nokwenza ngokwezifiso
NgoLwesihlanu, ngoJuni 3, i-2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-Twitter iyindlela yami yokuxhumana engiyithandayo… Ngiyakuvuma lokho. Ngiyakuthanda ukwenziwa lula kwayo nokusebenziseka kalula - kanye nenani elimangalisayo inethiwekhi yami enginikeza lona lapho ngidinga usizo. Okusha ezinkingeni zezinkundla zokuxhumana ukukhishwa kwenkinobho yokulandela iTwitter. Ngokungafani nesixhumanisi sangaphambilini esizokubuyisela ku-Twitter, le nkinobho ivumela noma yisiphi isivakashi ukuthi singene ngemvume futhi silandele ngokuchofoza okukodwa kwenkinobho. Sikufake kubha yethu eseceleni lapha eMartech.
Umsebenzisi ozolandela (igama lesikrini)
Abalandeli babala ukubonisa (idatha-show-count)
Umbala wenkinobho (inkinobho yedatha)
Umbala wombhalo (idatha yombhalo-wedatha)
Umbala wesixhumanisi (idatha-isixhumanisi-umbala)
Ububanzi (ububanzi bedatha)
Ukuqondanisa (ukuqondanisa idatha)
Uma ungakhululekile ukuhlela ikhodi ngokwakho, i-Twitter ingeze ikhasi lezinsizakusebenza lapho ungenza khona ngokwezifiso i-Twitter Follow Button yakho bese umane ubambe iskripthi ukuyifaka kusayithi lakho. Uma uthanda ukungena ngaphakathi, i-Twitter inekhasi lokuthuthukiswa elinemininingwane elizinikezele ku-Inkinobho Yokulandela.
Inothi elilodwa - uma ufisa ukufaka kuhlu ama-Akhawunti amaningi we-Twitter ongawalandela, ungabhala uhlu oluningi ngendlela ongathanda ngayo bese ufaka ithegi yombhalo kanye! Lokhu sikwenzile ku- Incwadi Yokubloga Kwebhizinisi indawo.
Jan 10, 2013 ku-7: 32 AM
Siyabonga ngethiphu. Kwaziswa kakhulu